अमेरिकाले साउदी अरबमा सेना परिचालन गर्ने ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकाले साउदी अरबमा सेना परिचालन गर्ने !
एजेन्सी /साउदी अरबका तेल खानी तथा प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरिएपछि त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सेना परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले साउदी अरबमा ‘प्रतिरक्षात्मक स्वरूप’मा आफ्नो सैनिक खटाउने घोषणा गरेको हो । तर कति सङ्ख्यामा अमेरिकी सैनिक पठाउने भन्ने विषयमा चाहिँ निर्णय भइसकेको छैन।
गत शनिबार साउदी अरबमा दुईवटा आक्रमण भएका थिए । उक्त आक्रमण भएपछि ती दुई ठूला तेल प्रशोधन केन्द्रमा उत्पादन अवरूद्ध भएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले हिंसाका लागि इरानको सम्लग्नता रहेको भन्दै शनिबारको आक्रमण यमनी भूमिबाट गरिएको आधान नभेटिएका दावी गर्नुभएको छ । इरानले भने अमेरिकी दावीको खण्डन गर्दै तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको आक्रमणमा आफ्नो सम्लग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ ।